अदालतमै पुगेर शाहरुख खानका छोरा आर्यनले स्वीकार गर्दै यस्तो कुरा खुलाएपछि……. – Online Khabar 24
October 17, 2021 by admin admin
‘ड्र ग्स पार्टी’ आयोजना गरेको अभियोगमा गत हप्ता गि’रफ्ता’र बलिउड अभिनेता आर्यन खान अहिले जेलमा छन्।
शुक्रबार उनको वकिलले धरौटीमा रिहा गर्न माग गरे पनि अदालतले अस्वीकार गर्दै आर्यनलाई जेल पठाएको हो।
यसैबीच भारतको ला’गुऔ’ष’ध अनुसन्धान गर्ने निकाय एनसीबी केरकार गर्ने क्रममा उनले आफूले ला’गुऔ’ष’ध प्र’यो’ग गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार बयानका क्रममा आर्यनले भनेका छन्, ‘हो म च’रे’श पि’उँ’छु्, क्रु’ज पार्टीमा पनि च’रे’स लिनेवाला थिएँ।’ यो संगै छोरा आर्यन खान पक्राउ परेको असर अभिनेता शाहरुख खानको पेसामा पर्न थालेको छ।
लर्निङ एप BYJU’S (बाइजुस) ले बलिउड अभिनेता शाहरुखका सबै विज्ञापनमा रोक लगाएको हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यति मात्र होइन, शाहरुखका प्रि–बुकिङ एड पनि रिलिज गरिरहेको छैन।
साहरुख खानको प्रायोजन सम्झौतामा बाइजुस सबैभन्दा ठूलो ब्रान्ड थियो। यो ब्रान्ड इन्डोर्स गरेबापत शाहरुखले बर्सेनि ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ (भारतीय) कमाउँथे। उनी सन् २०१७ देखि यो कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेस्डर हुन्। यसबाहेक उनीसँग आईसीआईसीआई बैंक, रिलायन्स जिओ, एलजी, दुबई टुरिजम्, हुन्डाईजस्ता झन्डै ४० कम्पनीका इन्डोर्समेन्ट छन्।
कम्पनीले किन त्यस्तो निर्णय गर्यो?
आर्यन प’क्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा शाहरुखविरुद्ध ट्रोलिङ सुरु भएको थियो। मानिसले ती ब्रान्डसलाई पनि टारगेट गर्न थाले, जसको विज्ञापन शाहरुख गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा मानिसले बाइजुसलाई सोधिरहेका थिए– शाहरुख खानलाई ब्रान्ड एम्बेस्डर बनाइराखेर कम्पनीले के सन्देश दिइरहेको हो? अभिनेता शाहरुख आफ्ना छोरालाई यो सब सिकाउँछन्?
यो पनि बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान उतिबेला ला’गूऔषधि सम्बन्धी मुद्दामा जेलमा रहेका छन्,
रिहाइका लागि अपिल गरिएपनि अदालतले उनलाई जमानत दिएको छैन । बिहीवारको आदेशअनुसार आगामी ५ दिन अदालत बन्द रहने भएकाले आर्यनले कम्तिमा २० अक्टोबरसम्म जेलमै बस्नुपर्ने भएको छ ।
जेलको स्रोतलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार आर्यनलाई जेलको खाना मन परिरहेको छैन । आर्यन जेलभित्र हैरान छन् । जेलभित्र सहज नभएका कारण आर्यन अधिकांश समय तनाव र हैरान देखिने गरेका छन् ।
जेल स्रोतले भन्यो, ‘जेलभित्र घुलमिल हुन समय लाग्छ, जेलभित्रको दुनियाँ अलग्गै हुन्छ ।’ आर्यनसँगै प’क्राउ परेका अन्य व्यक्तिलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै छुट्टाछुट्टै राखिँदा उनी एक्लै परेका छन् । आर्यनसँगै ६ आरोपी प’क्राउ परेका थिए । प’क्राउ परेपछि आर्यनको क्वारेन्टीन अवधि १३ अक्टोबरमा पूरा भएको छ । सबै आरोपीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाइएको छ ।
जमानतको विरोध गर्दै एनसीबीले अदालतमा आफ्नो जवाफ राखेको छ। अदालतमा दिइएको एनसीबीको जवाफमा आर्यन खानको बारेमा भनेका कुराहरु, उनका वकिलले इन्कार गरेका छन् र उनीहरुलाई आधारहीन भनेका छन्।
अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यनका वकिलले तर्क गरे कि उनी म्यासेज च्याटको आधारमा प’क्राउ परेका हुन्। त्यसैले उनीहरुलाई जमानत दिनुपर्छ।
यो केस मुम्बईमा एक क्रूजमा आयोजित कथित रेव पार्टीसंग सम्बन्धित छ। एनसीबीका प्रमुख एसएन प्रधानले अक्टोबर ३ मा मुम्बई क्रुज ड्रग्स प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरिने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘हामी यस मामिलामा निष्पक्ष रुपमा काम गरिरहेका छौं। यो ध्यान दिनुपर्छ कि बलिउड र केहि धनी मानिसहरु पनि यस मामिलामा संलग्न छन्। जो कोहि उनीहरु संग हुन्छ, हामी अझै पनि कानून को दायरामा रहेर हाम्रो काम गर्नेछौं।’ यो खबखर साभार गरियको हो।
Posted in मनोरंजन, रोचक
Prevआखिर के काणले छाडिन नायिका आलियाले मासु खान ? यस्तो छ रहस्य
nextअस्पताल पुगेकी यी युवतीको जब एक्सरे गरेर डाक्टरले छाती हेर्दा चकित परे, आखिर कसरि भयो यस्तो ?
लिपुलेकबारे सरकार बोल्यो, दियो यस्तो सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति?
एक बर्षमा ४ पटक पार्टी परिब’र्तन, आज जसपामा प्र’वेश गर्दै
भर्खरै मन्त्रीमाथी बम प्र’हार अवस्था गं’म्भिर अरू पनि धेरै घा’इते
यो ड’रलाग्दो घ’टना जहाँ एकै घरका ४ जना मान्छेको एकै पटक मृ’त्यु भयो
बज्यो ख’तराको घन्टी ,काठमाडौं उ’पत्यकामा नै नसोचेको भयो
अब अझ क’डाईका साथ यी ठाउँहरु पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय ,५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने
नेपालमा आज रा’ तीबाट प’ ब्जी र फ्री-फा’ एर ब’ न्द के यो स’त्य हो?,
अब अझ क’डाईका साथ यी ठाउँहरु पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय,५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने,